SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Motu Mutauro Wemasaini WekuJamaica Mutauro Wemasaini wechiBelgian French Mutauro Wemasaini wechiChinese Mutauro Wemasaini wechiCzech Mutauro Wemasaini wechiDutch Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiGreek Mutauro Wemasaini wechiPortuguese Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wechiSwiss German Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuAustria Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCosta Rica Mutauro Wemasaini wokuCroatia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuEl Salvador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuGhana Mutauro Wemasaini wokuGuatemala Mutauro Wemasaini wokuHonduras Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuIreland Mutauro Wemasaini wokuIsrael Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKenya Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMadagascar Mutauro Wemasaini wokuMalawi Mutauro Wemasaini wokuMalaysia Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuMozambique Mutauro Wemasaini wokuNew Zealand Mutauro Wemasaini wokuNicaragua Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPanama Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPhilippines Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSlovakia Mutauro Wemasaini wokuSlovenia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuSweden Mutauro Wemasaini wokuTaiwan Mutauro Wemasaini wokuThailand Mutauro Wemasaini wokuUruguay Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZambia Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Navajo Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Zvidhori zveBhabhironi naMwari waIsraeri (1-13)
Jehovha anotaura zvichaitika (10)
Shiri yekumabvazuva inodya nyama (11)
46 Bheri anokotamira pasi,+ Nebho anokotama. Zvidhori zvavo zvakatakudzwa pamhuka, idzo mhuka dzinotakuriswa zvinhu,+Semikwende inoremedza mhuka dzaneta. 2 Vanokotamira pasi uye vanokotama pamwe chete;Havagoni kununura mitoro,*Uye ivo vacho vanotapwawo.* 3 “Nditeererei, haiwa imi imba yaJakobho, nemi mese vasara veimba yaIsraeri,+Imi vandakachengeta kubva pakuberekwa uye vandakatakura kubva muchiri mudumbu.+ 4 Ndicharamba ndakadaro kusvikira pauchakwegura;+Ndicharamba ndichikutakura kusvikira wachena musoro. Ndichakusimudza, ndichakutakura uye ndichakununura, sezvandakaita.+ 5 Muchandifananidza naani kana kunditi ndakaenzana naani kana kunditi ndakaita saani,+Kuti tinzi takafanana?+ 6 Pane vanobudisa goridhe rakawanda muchikwama chavo;Vanoyera sirivha pachikero. Vanobhadhara mupfuri wesimbi, uye iye anoigadzirisa mwari.+ Vanobva vapfugama, chokwadi vanomunamata.*+ 7 Vanochisimudza vochiisa pamapfudzi avo;+Vanochitakura vochiisa munzvimbo yacho, uye chinongomira ipapo. Hachibvi panzvimbo yacho.+ Vanoshevedzera kwachiri, asi hachipinduri;Hachigoni kuponesa munhu pakutambudzika.+ 8 Yeukai izvi, mushinge. Zviisei mumwoyo, imi vadariki. 9 Yeukai zvinhu zvekare,* zvinhu zvekare kare,Kuti ndini Mwari uye hakuna mumwe. Ndini Mwari, uye hakuna akafanana neni.+ 10 Kubvira pakutanga, ndinogara ndataura zvichaitika pakupedzisira,Uye kubvira kare kare zvinhu zvisati zvaitwa.+ Ndinoti, ‘Zvandakasarudza zvichamira,*+Uye ndichaita chero zvandinoda.’+ 11 Ndiri kushevedza shiri yekumabvazuva inodya nyama,+Murume achaita zvandakasarudza* kubva kunyika iri kure.+ Ndakazvitaura, uye ndichazviunza. Ndine chinangwa chekuzviita, uye ndichazviita.+ 12 Nditeererei imi vakaoma musoro,Imi muri kure chaizvo nekururama. 13 Ndaswededza pedyo kururama kwangu;Hakusi kure,Uye ruponeso rwangu haruzononoki.+ Ndichapa ruponeso muZiyoni, kubwinya kwangu kuna Israeri.”+
^ Kureva, zvidhori zvakatakudzwa pamhuka.
^ Kana kuti “mweya yavo inotapwawo.”
^ ChiHeb., “vanomukotamira.”
^ ChiHeb., “zvinhu zvekutanga.”
^ Kana kuti “Chinangwa changu chichamira.”
^ Kana kuti “achazadzisa chinangwa changu.”